प्रति पोष्ट कति शब्दहरू सहि छन्? | Martech Zone
कुडोस देखि इन्डी संगममा राख्नका लागि इन्डियानापोलिस मा यहाँ महान नेटवर्किंग घटना हिजो धेरै जसो नेटवर्कि events घटनाहरूको विपरीत, इन्डी संगम ब्रेट हेलेको नेतृत्वमा र एरिक डेकर्स, यहाँ क्षेत्रका मान्छेहरूको प्यानलमा ल्याइएको यसका सबै सदस्यहरूलाई केही मूल्य-थप सल्लाह प्रदान गर्न। यस महिनाको विषय भनेको कर्पोरेट ब्लगि Why किन एक कम्पनीको सफलताको लागि आलोचनात्मक हो र मलाई प्यानेलमा हुन आमन्त्रित गरियो।
प्यानल क्रिस बगगट समावेश गरीएको थियो, रोडो इजरायलभ, रोडर जॉनसन, काइल लेसी र म।
यो एक ठूलो छलफल थियो तर एउटा विषय मेरो क्रसमा अडियो: ब्लग पोष्टमा कति शब्दहरू हुनुपर्दछ?.
कुराकानी तालिकाभरि फैलियो र प्रायः वक्ताहरू pithy पोष्टहरूको लागि धक्का दिए र संख्या २ 250० शब्दहरूलाई इष्टतमको रूपमा बाहिर राखियो। एक 'लामो प्रतिलिपि' ब्लगर को रूपमा, म प्यानल द्वारा आउटवाट गरिएको थियो।
मेरो ब्लग को पाठकहरु को लागी, तपाईलाई थाहा छ कि म २ 250० शब्दहरुमा ब्लग पोष्ट पनि सेट अप गर्न सक्दिन (यो पोष्ट एक राम्रो उदाहरण हो)। मसँग धेरै पाठकहरू, उत्तम खोज इञ्जिन प्लेसमेन्ट, र बढ्दो संख्यामा ग्राहकहरू छन् - र म कहिले पनि दिक्क लाग्ने छैन! मैले संख्या विश्लेषण गरे शब्द प्रति पोष्ट र यसलाई मेरो आफ्नै ब्लगमा लोकप्रियता पोष्ट गर्न तुलना गर्नुहोस् र कहिले पनि कुनै सहसंबंध भेटिएन।
यस पटक मैले केहि अन्य ब्लगहरू हेर्ने निर्णय गरें। यद्यपि कुनै पनि ब्लगहरू मात्र होईन। मैले खोजी गर्दा गुगलमा शीर्ष results नतिजाहरू चयन गरें SEO को लागी ब्लगिंग। मलाई लाग्छ कि त्यस लडाईको शीर्ष अन्तमा कसैसँग पनि उनीहरूको पोष्टहरूमा केही स्थिरता हुनेछ जुन मलाई अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। पाँच ब्लग विश्लेषण थिए SEOmoz, गुगलका लागि एसईओ, अनलाइन मार्केटिंग ब्लग, हिट्टेल ब्लगर दैनिक SEO ब्लग.
किनकि यि ब्लगहरू उच्च खण्ड खोज परिणाममा छन्, त्यसैले म तिनीहरू दुबैले लोकप्रिय र प्रासंगिक छु भनेर मान्दै छु। कुल blog० ब्लग पोष्टको लागि मैले प्रति ब्लगमा अन्तिम १० ब्लग पोष्ट खींचें। यो कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक छैन तर मलाई विश्वास छ कि परिणामहरू प्यानलको बखत मैले के तर्क गरेको थिएँ भनेर दोहर्‍याउँछ।
SEOmoz प्रति पोस्ट 832.3१२..512.5 शब्दको औसतसँग postXNUMX२.। शब्दहरू थिए।
गुगलको लागि एसईओको प्रति पोष्ट 349.7 315..XNUMX शब्दको औसतसँग प्रति पोष्ट XNUMX१ of शब्दहरूको औसत साथ थियो।
शीर्ष रैंक ब्लगसँग प्रति पोष्ट औसत 742.5 words२..744 शब्दहरू हुन्थ्यो जुन प्रति पोष्ट XNUMX XNUMX शब्दहरूको औसतसँग थियो।
हिट टेल ब्लगसँग प्रति पोस्ट २ 255 शब्दको औसतसँग २ 233 शब्दहरू थिए।
दैनिक एसईओ ब्लग प्रति पोस्ट an०450.8 शब्दको औसतसँग words words०..507 शब्दहरू थिए।
अन्तिम परिणाम को एक औसत हो 526 शब्द प्रति पोष्ट र एक मध्यक 447 शब्द प्रति पोष्ट। Meas० पोष्टहरू मापन गरियो (प्रति ब्लग १०), ती मध्ये केवल 50०० भन्दा कम शब्दहरू थिए। विगतमा, मैले प्रमाणित गरें कि पोष्टको आकारले मेरो ब्लगको पाठकलाई प्रभाव पारेन। अब म यसलाई फेरि भन्नेछु, सल्लाह प्रति पोष्ट शब्दहरूको लागि यो होः
शब्दहरूको संख्या तपाईंले प्रति पोष्ट लेख्नुहुन्छ शब्दहरूको संख्या यो पोष्टको कुञ्जी उद्देश्य पूरा गर्न ले लिनुपर्दछ। म थप्न चाहान्छु कि प्रति पोष्ट शब्दहरूको संख्या हालको पाठकहरूको अपेक्षाहरूसँग मिल्दो हुन्थ्यो। म शब्दहरूको स count्ख्या गन्न सक्दिन - मैले सुनिश्चित गरेको छु कि यदि कसैले मेरो ब्लग पोष्ट खोजी ईन्जिनबाट फेला पारे कि उनीहरूले उनीहरूलाई के प्राप्त गरे।
टैग: शब्दहरूको संख्याशब्द गणना
यो जानकारी मेरो लागि एकदम नयाँ छ। मैले जहिले पनि एउटा विषयलाई धेरै पोष्टहरूमा विभाजित गरेको छु जब यो धेरै ठूलो हुन्छ किनभने म मेरा पाठकहरू स्क्रोलिङ आतंकको अति शक्तिशाली भावनाबाट अभिभूत भएको चाहन्न। व्यक्तिगत रूपमा, मलाई धेरै तल स्क्रोल गर्नुपर्ने साइटहरू मन पर्दैन। जे होस्, तपाईंले भर्खरै केही रोचक कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हुनसक्छ, मैले 2500 शब्दहरू भन्दा बढी लिने भए पनि एउटा पोस्टमा एउटा विषय समाप्त गर्नुपर्छ। यस्तो रोचक लेख पोस्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
यदि सामग्री सान्दर्भिक र सार्थक छ, तपाईंको जस्तै, डग, तब लम्बाइ महत्त्वपूर्ण छैन। अर्कोतर्फ, यदि एक ब्लगरले आफैले बोलेको सुन्नको लागि मात्र कुरा गरिरहेको छ (जुन प्रायः केस हुन्छ, दुर्भाग्यवश), तब त्यो पूर्णतया अर्को कुरा हो!
तपाईको बिन्दुमा पुग्नको लागि ब्लग पोष्टमा धेरै शब्दहरू हुनुपर्दछ।
केहि भन्नु छैन? कुनै बिन्दु =0शब्दहरू
सायद तपाईले भन्नु पर्ने सबै एक वाक्य हो। तर साँच्चै राम्रो वाक्य! तपाईं उद्धरणको पुस्तकमा समाप्त हुन सक्नुहुन्छ, अपराधको खातिर!
हावाको ठूलो बोसो झोला, तर हावाको रोचक झोला = लेख्नुहोस्! यसलाई बाहिर दिनुहोस्। भेन्ट! गाली! रेभ! कस्लाई कति शब्दको वास्ता ???? यदि यसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँछ भने, यो गर्नुहोस्! (यो गैर-व्यावसायिक ब्लगरको लागि बढी हो।)
मानिसहरूले लामो पोस्टहरू पढ्छन् यदि विचारहरू तिनीहरूलाई तान्न पर्याप्त बलियो छन् ... यदि लेखन कमजोर छ भने, शब्दको मात्रा वा शब्दहरूको कमीले पोस्ट बचाउन सक्दैन।
यहाँ शब्द संख्याको सट्टा कुञ्जी सामग्री होइन? यदि तपाईंसँग राम्रो सामग्री छ भने, मानिसहरूले तपाईंलाई लिङ्क गर्नेछन् र यसरी तपाईंलाई Google अधिकार दिनेछन्, वा टिप्पणीहरूमा छलफललाई जीवित राख्नुहोस् र यसरी Google लाई तपाईंको वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ भन्ने छाप दिन्छ। र 250 भन्दा बढी शब्दहरूसँग राम्रो सामग्री पाउन सजिलो छ। वा म केहि छुटेको छु?
पहिले ब्लग गरेका मानिसहरूका लागि, मलाई लाग्छ कि यो कुनै दिमागी छैन र सामग्री राजा हो। जे होस्, पहिलो पटक ब्लगर वा कर्पोरेसनलाई ब्लगिङको बारेमा सोच्दै, यो एक प्रश्न हो जुन लगातार आउँछ त्यसैले हामीले यसको जवाफ दिनु महत्त्वपूर्ण छ।
"तपाईले प्रति पोस्ट लेख्नुहुने शब्दहरूको संख्या पोस्टको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न लाग्ने शब्दहरूको संख्या हुनुपर्छ"
यो सबैभन्दा समझदार सल्लाह हो जुन मैले यस विषयमा पढेको छु।
(अवश्य पनि, लामो पोस्ट लेख्ने व्यक्तिको रूपमा म पक्षपाती छु 🙂)
मेरो ब्लगका नियमित पाठकहरू भन्छन् कि उनीहरूलाई मेरो लेखन शैली मनपर्छ, त्यसैले म यसलाई परिवर्तन गर्न जाँदैछु किनभने केहीले 250 शब्दहरू अधिकतम हुनुपर्छ (यसले SE को लागि कुञ्जी शब्दहरूको राम्रो मिश्रणलाई पनि अनुमति दिन्छ)।
तपाईका पोष्टहरू राम्रो जानकारी र उत्कृष्ट पढाइले भरिएका छन्, त्यसैले हो, उत्कृष्ट सल्लाह: 'स्वीकार गरिएको मानक' को पालना नगर्नुहोस्; तपाईको लागि उत्तम काम गर्ने कुरा फेला पार्नुहोस् र शब्दहरू गणना गर्न रोक्नुहोस् 🙂
जब हामी कन्फ्लुएन्सको प्यानलमा विषयको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं तब मैले यो बिन्दु बनाउन खोजेको थिएँ। तपाईले यसलाई थप कक्षाको साथ गर्नुहुन्छ। 🙂
@Cynthia तपाईंले भेन्ट, रान्ट, र रेभ भन्नुभएको तथ्यलाई मनपर्छ। मेरो ब्लगमा सबैभन्दा धेरै पढिएका पोष्टहरू हुन् जब म कुनै कुराको बारेमा र्‍यान्ट गर्दै छु। 🙂
यस उद्योगमा धेरै गलत जानकारी छ र कसैसँग पनि जादुई बुलेट छैन! गुगलले अझै पनि मलाई कहिलेकाहीँ नराम्रो खोज परिणामहरू दिन्छ र अन्य समयमा मलाई राम्रोसँग लेखिएको पोस्टमा दुर्गन्ध लाग्छ।
मलाई लाग्छ कि यसलाई जगेडा गर्नको लागि केहि डेटाको साथ 'विचार' हटाउन महत्त्वपूर्ण छ! हामी अझै सिकिरहेका छौं।
मार्स 5, 2009 मा 3: 39 एएम
राम्रो SEO सुझाव
धेरै राम्रो जानकारी! यसलाई साझा गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
अक्टोबर 19, 2011 बिहान 8:59 बजे
राय ओभर-रूल गर्न डेटा प्रयोग गर्ने जस्तो केहि छैन। लेख (ब्लग वा अन्यथा) मा मेरो व्यक्तिगत विचार हो "राम्रो लेखन जीत!" राम्रो लेखन (व्याकरण, सामग्री, कथा प्रवाह, आदि) म यसलाई लामो समय सम्म पढ्छु।
डिसे 2, 2011 मा 1: 41 AM
यो पोष्टको लागि धन्यबाद किनभने म यो पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेको छु। मेरा धेरैजसो पोष्टहरू प्रति पोस्ट 350 देखि 450 शब्दहरूमा छन्। मलाई थाहा छ जब म एक ब्लगमा जान्छु र पोष्ट 500 शब्दहरू भन्दा बढी हुन्छ, म यसलाई मात्र स्किम गर्छु। मलाई लाग्दैन कि धेरै मानिसहरू लामो ब्लगहरू पढ्न मन पराउँछन्। म 500 भन्दा कम शब्दहरूमा मेरो कुरा बुझ्न प्रयास गर्छु। सायद म गलत छु। जे होस्, मेरो विचार मात्र हो। सेली
4 डिसेम्बर, 2011 बेलुका 9:47 बजे
म पक्कै सहमत छु कि मानिसहरू कम पढ्छन्। हामी हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई 'स्किमरहरू' क्याप्चर गर्नका लागि बुलेट पोइन्टहरू, राम्रो छविहरू, र बोल्ड/जोर प्रयोग गर्न धक्का दिन्छौं। यदि तपाईं एकरूप हुनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ... त्यसैले मानिसहरू प्रत्येक भ्रमणमा उही कुराको आशा गर्न आउन सक्छन्।
15 डिसेम्बर, 2011 बेलुका 1:25 बजे
गत महिना एलिसन कार्टर र जेरेमी जुकरको नेतृत्वमा धेरै साथीहरूसँगको कुराकानीमा यो निष्कर्ष निकालिएको थियो कि प्रति पोस्ट शब्दहरूको सही संख्या थियो तपाईंले भन्नुभयो, "पोस्टको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न शब्दहरूको संख्या।"
मई 7, 2012 मा 3: 13 PM
म जादुई नम्बर खोज्दै थिएँ, र सही उत्तर भेटियो! धन्यबाद, म्याट
जुन 2, 2012 बिहान 9:59 बजे
तपाईंले प्रति पोस्ट लेख्नुहुने शब्दहरूको संख्या पोस्टको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न लाग्ने शब्दहरूको संख्या हुनुपर्छ।
मई 1, 2013 मा 2: 46 PM
यसले धेरै मद्दत गरेको छ। धन्यवाद। अब म डराउने छैन यदि मैले 600 शब्दहरू हिट गरेन भने। छविहरूमा के सोचाइ छ?
मई 1, 2013 मा 3: 35 PM
छविहरू महत्वपूर्ण छन्! कठिन विषयहरू व्याख्या गर्न मात्र होइन तर पाठकहरूलाई तपाईंको सामग्रीमा आकर्षित गर्न र तिनीहरूलाई सम्झन मद्दत गर्न पनि मद्दत गर्नुहोस्। -
जुन 9, 2013 बिहान 8:58 बजे
राम्रो उपयोगी जानकारी। मलाई लाग्यो कि 700 भन्दा बढी शब्दहरूले पाठकलाई हराउन सक्छ। कागजात उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद।
मार्स 13, 2014 मा 4: 48 एएम
के यो समय संग परिवर्तन भएको छ? यो थप वर्तमान डाटा हेर्न रोचक हुनेछ।
मार्क्स 13, 2014 मा 12: 01 PM
म विश्वस्त छु, @mikemorrison1:disqus, यद्यपि मेरो लेखनमा खासै परिवर्तन आएको छैन। खोज इन्जिनहरू अब धेरै मिडिया प्रकारहरू, थप पाठ र थप तत्वहरू (बुलेट गरिएको पाठ, उपशीर्षकहरू, इत्यादि) सँग 'गाढा' पोष्टहरूको बढी प्रशंसा गर्छन्।
मई 16, 2014 मा 2: 17 PM
त्यहाँ कुनै कडा र छिटो नियमहरू छैनन् प्रति पोस्ट कति शब्द सही छ। त्यो पोष्टको शीर्षकमा निर्भर गर्दछ, कति पोस्टलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न आवश्यक छ। पोस्टमा बिभिन्न कोटीहरू हुन सक्छन् जस्तै केहि पोस्ट सानो, मध्यम र लामो पुच्छर हुन्। उही मापदण्डहरू यस पोस्टमा वर्णन गरिएका छन् सीमहरू प्रति पोस्ट 832.3 शब्दहरूको मध्यका साथ प्रति पोस्ट औसत 512.5 शब्दहरू छन्। शीर्ष ट्याङ्क ब्लगको औसत 742.5 शब्दहरू प्रति पोस्ट 744 शब्दहरू प्रति पोस्टको साथ थियो।
यो अझै हालको जानकारी हो?
हामीले यो विश्लेषण वर्षौंमा पुन: चलाउन सकेनौं तर यो समय हुन सक्छ। मलाई विश्वास छ कि गुगलले विगतको तुलनामा प्रति पृष्ठ धेरै शब्दहरूसँग "गाढा" पृष्ठहरूमा धेरै हेरिरहेको छ। डाइरेक्टरीहरू विगत केही वर्षहरूमा प्रदर्शन रूपमा श्रेणीमा उतार-चढाव भइरहेको छ। हामी कम्तिमा 250 शब्दहरू राख्न प्रयास गर्छौं र हामीले क्रमबद्ध गर्न खोजिरहेका पोष्टहरूसँग 500 देखि 1000 शब्दहरू हिट गर्ने प्रयास गर्छौं।